2019 Black Friday & Q4 Facebook Ad Playbook: Otu esi eme nke ọma mgbe ụgwọ ga-ebili | Martech Zone
Oge izu ahia ezumike abiarula anyi. Maka ndị mgbasa ozi, Q4 na izu nke gbara Black Friday adịghị ka oge ọ bụla ọzọ n'afọ. Ad na-akwụ ụgwọ dịka 25% ma ọ bụ karịa. Asọmpi maka akụrụngwa dị mma dị egwu.
Ndị mgbasa ozi Ecommerce na-ejikwa oge ọganihu ha, ebe ndị mgbasa ozi ndị ọzọ - dị ka egwuregwu mkpanaka na ngwa - na-atụ anya imechi afọ siri ike.
Mbubreyo Q4 bụ oge na-ekwo ekwo nke afọ maka ndị na-ere ahịa, yabụ na ọ dịghị ka ebe mgbasa ozi ndị ọzọ dị jụụ. Mana mgbasa ozi Facebook na-enweta asọmpi kachasị site na Ọktọba ruo Disemba 23. Ma ọ bụ ezie Facebook mgbasa ozi ọnụahịa dị elu n'oge mbubreyo Q4, ọ ka bụ ebe kachasị mma n'obodo. Imirikiti ndị mgbasa ozi kachasị ga-azụ ahịa ike.
Ọbụna na ọnụahịa erugoro, ọtụtụ ndị mgbasa ozi ecommerce na-eme nke ọma. Nnyocha a na-adịbeghị anya site na Zụọ ahịa Gụnyere gosipụtara na ndị na-ere ahịa ecommerce na-ekwu na mgbasa ozi Facebook bụ ọwa kachasị dị irè maka ọhụụ ahịa nnweta n'oge ezumike.
N'ezie, ọ bụghị ihe ijuanya na n'afọ ọ bụla mgbasa ozi na-abawanye ọnụ na Black Friday, Cyber ​​Monday, na ezumike Disemba niile. Ndị mgbasa ozi niile maara nke a. Ha na-abanye na oge ahụ jiri obi ike na-agbanyeghị aka, na-adị njikere ịkwalite elu iji kụrụ ihe ha na-eme kwa afọ. Onye obula nke lere anya na ntaneti Mgbasa ozi Facebook n'oge ezumike aghaghi ilo otu kol mgbe ha lere anya na ugwo ha.
O doro anya na: 80% nke ndị na-ere ahịa ecommerce na-ekwu "ịrị elu mgbasa ozi mgbasa ozi" bụ nchegbu maka ahịa ezumike.
N'agbanyeghị ego na asọmpi ahụ, Q4 bụ oke ohere. Maka ndị na-ere ahịa, ọ bụ ohere iji bulie oge ịzụ ahịa kachasị mma n'afọ. Maka egwuregwu egwuregwu na ngwa ọdịnala, ezumike ahụ na-ebute oge mgbasa ozi kachasị ụgwọ nke afọ na ihe ga-abụ obere CPM nke 2020.
Iji nyere gị aka ịnyagharịa oge, lee ise Omume kachasị mma Facebook na-eme n'ihi na mbubreyo Q4:
1. Jikwaa Mgbanwe Mgbanwe na Mgbasa Ozi Adị.
Emela nke oma, uzo nke mgbasa ozi ezumike nwere ike idi nkpa dika ezumike. Ndị mgbasa ozi nwere ike leverage retinggeting, email lists, na ndị ọzọ na-eri-irè ọwa mgbe December 8th - if ha emeela mkpọsa ha nke ọma tupu nke ahụ.
Ma eledala ọganihu nke ịzụ ahịa mgbe emesịrị-ekeresimesi. Onye obula nwere obi uto iwere ego ekeresimesi ha zuta onwe ha ihe Santa ewetaghi. Ọ bụ ya mere oge ga-eji bụrụ December 26 ga-arụ ọrụ kachasị mma. Were oge a nwalee mgbasa ozi ngwaọrụ ọhụụ (dịka iPhone 11), vidiyo, na ozi ọhụụ / ihe okike. Ma kwụsịtụ ruo n’abalị iri na ise nke ọnwa Jenụwarị ma ọbụbụ ụbọchị Valentpo. Ọtụtụ ndị mgbasa ozi ọdịnala na-adọghachi mgbasa ozi ha na mbido afọ, na-ahapụ windo ohere mara mma maka ndị ọzọ.
2. Dịkwuo Nkezi Nkezi Nha.
Mgbe ole njirimara nnweta akwụ ụgwọ bilie, ị nwere nhọrọ abụọ maka ịchekwa uru: belata ụgwọ gị / ngwaahịa, ma ọ bụ bulie ogo nha. N'ụzọ dị mma, ịbawanye ụba nha nke zuru ezu na-agbakwunye ihe na-eme na Q4 nke ọma - ndị mmadụ na-etinyekwu ego, ma na onwe ha na ndị ọzọ.
Enwere ọtụtụ ụzọ iji bulie ogo nha:
Inye onyinye ndi ozo maka ego
Iji $ -off discounts (“imefu $ X, nweta $ anya” na-enye)
Nwekwara ike ịhapụ ịtọfe usoro nha usoro a, kwa. Dabere na ụlọ ọrụ gị na ọnọdụ gị, ọ nwere ike ịbụ ihe ezi uche dị na isoro onye ndu na-efu na Q4 wee jiri ya wuo ndị ahịa gị.
Ọ bụrụ n ’ijikwa atụmatụ onye ndu na-egbu gị nke ọma, ị nwere ike ịgbaji (ma ọ bụ rite ezigbo uru), mana ị ga-agbakwunye ọtụtụ ndị na ndepụta ndị ahịa gị. Zọ na irè njigide ahịa, na Christmas nwere ike ịbụ a mma ohere dị nnọọ chọta dị ka ọtụtụ ndị ọhụrụ ahịa dị ka i nwere ike.
3. Chere ya ma ọ bụ chọta akpa nke arụmọrụ.
N'ezie, ọ bụghị mmadụ niile nọ na ecommerce. Ọ bụrụ n ’ị na-azụ ahịa ngwa ma ọ bụ na-eduga n’ọgbọ, ezumike ahụ na-eweta nsogbu dị iche.
Maka ndị mgbasa ozi Facebook ndị na-anọghị na ecommerce, oge kachasị mma iji mefuo n'oge nke anọ bụ n'etiti Ọktoba 1st site na Ekele. CPM na-abawanye n’oge ahụ, mana ọ bụghị nke ukwuu. Mgbe ahụ anyị na-akwado gị ịlaghachi azụ ma ọ bụ gbanwee oge nọrọ n'etiti Nọvemba 28 ruo Disemba 10.
Ndị a bụ ụfọdụ aro ndị ọzọ iji nyere gị aka ịlụ ọgụ ọnụ ahịa na-arị elu n'oge ọnụ ọgụgụ CPM kacha elu:
Maka mmefu ego:
Ọ bụrụ na ị ga-emefu ego na nkeji nke anọ ma ị bụghị ụlọ ọrụ ecommerce, gbalịa itinye ego n'ihu dị ka o kwere mee na Ọktoba na Nọvemba.
Maka ndị na-ege ntị:
Lekwasị anya n'ahịa ndị na-erughị asọmpi n'oge oge dị elu.
Kpebie mmefu ego na gam akporo. Ọ na-ahụkarị nrịbawanye ọnụ ahịa na ọnụahịa.
Leverage data sitere na mkpọsa mba ụwa na-abawanye na EMEA (Europe, Middle East, na Africa), APAC (Asia-Pacific), na LATAM (Latin America) ebe asọmpi ezumike adịghị oke egwu.
site na 2019 Q4 NA (North America) Ezumike Playbook PDF
Maka ịgba akwụkwọ:
Mee ka ebumnuche ụwa dum lebara anya site na iji njikarịcha uru baa ụba na ahịa ụwa, ma n'otu oge na -eche maka ọnụ ala kacha ala maka ịzụrụ. Nke ahụ na-echekwa ROAS ka ọ na-arụ ọrụ mmeba ahụ.
Nchọpụta Facebook maka usoro Structure for Scale (S4S) ọhụụ egosila na mgbasa ozi setịpụrụ na-eme ka ọ kwụsie ike mgbe mgbasa ozi ruru ọkara ma ọ dịkarịa ala mgbanwe 50 kwa izu. Ha achọpụtala mmekọrịta dị n'etiti mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-enweta olu a, belata CPA, yana ROAS siri ike. Mgbe ụfọdụ mmelite ROAS nwere ike ịfe 25%.
Bido obere na obere ikikere ROAS, mana jiri ya. Obere ego ROAS na-enye ndị mgbasa ozi ohere itinye aka na nloghachi ha chọrọ maka mgbasa ozi gbasoro ọ bụla. Nwere ike ịtọ nke kacha nta ROAS na ọnụọgụ karịrị 0.01%, mgbe ahụ Facebook ga-akwụsị inyefe mgbasa ozi gị ma ọ bụrụ na ha enweghị ike imeri pasent ahụ akọwapụtara. Ọ na-arụ ọrụ kachasị mma ma ọ bụrụ na ịmalite site na ịnwale ihe mgbaru ọsọ ROAS dị ala (<1%) megide ndị na-ege ntị sara mbara, wee wụkwuo elu ma ọ bụrụ na arụmọrụ adịghị (1%, 2%, wdg). Ebidola elu wee tụọ ya; opekempe ROAS na-arụ ọrụ nke ọma ịbụ ịrị elu.
Jiri AEO maka ịzụrụ akwụkwọ ntuziaka maka ịzụta. Ọ bụrụ na ị na-enwe nnyefe ma ọ bụ mgbanwe dị ala dị ala na autobid, chee echiche ịgbanwe gaa asọmpi asọmpi asọmpi dị elu (ọnụ ala kachasị ọnụ ahịa ya). N'iji ọnọdụ ezumike a na-atụghị anya ya dị ka n'oge ezumike, ọnụ ahịa dị mma bụ ụzọ dị mma iji jigide nnyefe kwụsiri ike.
Maka ihe okike:
Mee atụmatụ maka ihe ndị ọzọ na-enye ume ọhụrụ oge niile na alụ ọgụ ike ọgwụgwụ. Probably nwere ike ị ga-eme atụmatụ tupu oge eruo maka nke a, dị ka ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ọ dịkarịa ala oge ụfọdụ ezumike gburugburu ezumike. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, lelee onye otu imepụta ihe anya mụbaa ikike.
ịzụlite ezumike-themed okike iji mee ka akara dị mkpa. Nke a nwere ike inye aka belata ụfọdụ ụgwọ dị elu nke mgbasa ozi ezumike.
ule Mgbasa mgbasa ozi na Network Audience ịchụpụ ndị ọzọ na-etinye aka, nrụnye dị elu. Facebook kwuru na mgbasa ozi ndị a na-enweta arụmọrụ kachasị mma nke usoro mgbasa ozi ọ bụla ugbu a.
Ọ dabara nke ọma, ụbọchị ndị dị oke ọnụ gafere. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anwansi, na December 26th, ụgwọ na-ada. Imirikiti ndị na-ere ahịa ecommerce ejirila mmefu ego ha, ree ngwa ahịa ha, ma tụlee afọ emere.
Nke a bụ mgbe ndị na - ere ahịa na - abụghị ecommerce - dị ka egwuregwu na ngwa agagharị - nwere ọmarịcha ụbọchị ha. Ha ga-enwe obi ụtọ ụfọdụ n'ime CPM kachasị arụ ọrụ nke afọ site na Disemba 26 ruo na ụbọchị Valentine na February 14, 2020.
Were uru nke dobe na CPI na influx yiri nkata si December 26th site Valentpo Day site na iji Onu ahia. Mgbe ekeresimesi bụkwa oge dị mma iji kwụsị ndị ọrụ ngwaọrụ ọhụụ, ihe okike pụrụ iche nwere ike ị nweta oge dị mkpa. N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchịkwa ọnụ ahịa n'oge ụbọchị anwansi ndị a, ị ga-ewepụtala ụfọdụ mmefu ego tupu oge eruo.
4. Gbado anya na Mobile.
Onye ọ bụla maara na okporo ụzọ mkpanaka ugbu a karịa njem desktọọpụ. Mana otutu ndi ahia ka kwere mbugharị agagharị anaghị agbanwe agbanweMa ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na ọ naghị atọghata yana desktọọpụ desktọọpụ.
Nke ahụ nwere ike ọ gaghị abụzi eziokwu.
A ọmụmụ nke Mgbasa ozi Googlezụ ahịa Google kpughere mmụba dị ịrịba ama na ntụgharị ntụgharị ekwentị n'ime afọ ole na ole gara aga. Ọnụego mgbanwe maka ndị na-azụ ahịa na-amalite ma kwụsị njem nke ndị zụrụ ahịa na ngwaọrụ mkpanaka amụbawo site na 252%.
Ma chere… e nwere ihe:
Zọ nke ndị na-azụ ahịa na-amalite nyocha ha na desktọọpụ ma mezue zụọ ha na mobile bilitere 259% afọ karịa afọ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụfọdụ ndị na-ahọrọ iji ekwentị nyochaa ma ọ bụ na desktọọpụ.
N'ezie, nke ahụ bụ Shozụ ahịa Google, ọ bụghị mgbasa ozi Facebook. Ma Facebook mere nyocha nke aka ya. Ha chọpụtakwara na ndị na-eji ekwentị eme ihe abụrụla ndị na-azụ ahịa ekwentị.
5. Jiri vidiyo.
Ọ bụrụ na ịnọla na ntinye ego na vidiyo ma ọ bụ itinyekwu ego na vidiyo, ọ nwere ike ịbụ njedebe ịchọrọ maka Q4 2019.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 n’ime ndị ahịa atọ na-ere ahịa mkpanaka e nyochara na United States kwuru na vidiyo bụ usoro kachasị mma maka ịchọta ngwaahịa ọhụrụ.
Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta ọtụtụ ndị na - azụ ahịa, mekwuo vidiyo - ma maka Facebook na Instagram. Ee ee, Virginia, a ka nwere oge zuru ezu iji nweta videos emere tupu ezumike ezumike.
Kedụ ka ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị ga-esi mee ka ọnụ ahịa mgbasa ozi Q4 Facebook mụbaa? Usoro gị maka Q4 arụ ọrụ nke ọma n'afọ gara aga? Chee echiche banyere ebe ị na-na strategize maka ebe ị na-aga. Naanị chere ngwa ngwa; Black Friday dị anyị.
Tags: ad spend ifenwa ogeagbakọtaahịa nnwetaDecember ezumikefacebook mgbasa ozidashboard mgbasa ozi facebookndị mgbasa ozi egwuregwugoogle ịzụ ahịa mgbasa oziezumike cpmNhazi maka nha